Huizhou Jinhaocheng Non-dzakarukwa Fabric Co., Ltd.
Huizhou Jinhaocheng Non-dzakarukwa Fabric Co., Ltd, iro rakaumbwa muna 2005, pamwe fekitari chivakwa rakavhara imwe nzvimbo 15,000 mativi metres, ari nyanzvi namakemikari faibha nonwovens kugadzirwa vaifarira enterprise.Our kambani akaziva zvakazara zvoga kugadzirwa, izvo zvinogona kusvika zvachose wepagore kugadzirwa vanokwanisa matani 6,000 vanopfuura makumi kugadzirwa mitsetse mu yose. Iri Huiyang District, Huizhou Guta Guangdong Province, pane vaviri mukuru-nokukurumidza kuyambuka. boka redu anova nyore zvifambiso nekupinda maminitsi 40 chete kutyaira kubva Shenzhen Yantian Port uye maminitsi 30 Dongguan.
zvigadzirwa dzedu dziri akakamurwa: tsono chibhakera Series, Spunlace Series, Thermal waakaita (Hot mhepo kuburikidza) Serial, Hot Rolling Serial, Quilting Serial uye Lamination Series.Our chikuru zvigadzirwa ndiwo: multifunctional ruvara akanzwa, kudhindwa non-dzakarukwa, motokari rejira mukati, nzvimbo ouinjiniya geotextile, makapeti nechigadziko jira, yemagetsi negumbeze non-dzakarukwa, utsanana unopisika, zvakaoma donje, fenicha dziviriro bonde, metiresi ikanyanya, fenicha padding uye others.These vasiri dzakarukwa zvigadzirwa anoshandiswa nevakawanda uye infiltrated muminda munzanga ano siyana, dzakadai sezvo: kudzivirira zvakatikomberedza, motokari, shangu, fenicha, nepanhovo, zvipfeko, zvikwama, matoyi, Sefa, zvoutano, zvipo, zvemagetsi zvokushandisa, Audio midziyo, injiniya kuvaka uye mamwe maindasitiri. Achigadzira zvinoitwa zvigadzirwa, isu kwete chete akasangana mumhuri vade asiwo aivigirwa kuJapan, Australia, Southeast Asia, Europe uye dzimwe nzvimbo uyewo kunakidzwa refu mukurumbira kubva nemakasitoma yose.
chigadzirwa unhu High ndiyo hwaro hwedu vachida. Ane hurongwa uye controllable utariri gadziriro, tangoita ISO9001: 2008 yepamusoro kutarisirwa hurongwa advertising. All mishonga yedu zvakatipoteredza ushamwari uye kukwira kusvikira tisvike, kuchena uye PAH, AZO, pedyo benzene 16P, formaldehyde, GB / T8289, EN-71, ari F-963 uye British mwero BS5852 Kudzivirira murazvo retardant moto yokuedzwa mitemo. Uyezve, zvinhu edu titevedzere RoHS uye OEKO-100 mitemo.
Kuti tirambe makwikwi mishonga, kambani yedu anoteerera zvikuru kuti kutsvakurudza uye kukura zvigadzirwa zvitsva, zvikuru kumisa R & D dhipatimendi, uye vakagadzirira pamwe yemhando midziyo uyewo kunyatsoteerera, sezvazviri, nyanzvi, uye michina vashandi. R & D basa nezvezvaiitwawo zvinhu zvitsva uye kwesayenzi kukura muitiro pamisika dzakawanda, sezvo yokudengenyeka vatengi 'zvinodiwa, kukudziridza matsva mufashoni uye yepamusorosoro non-dzakarukwa products.At chipo, kunopindirana R kambani yedu & D sandara, yave nemasiraidhi akapendwa pamwe dzakawanda musika kudiwa, uye akapa vimbiso yakasimba kuti simba kukura kutungamirira zvinogadzirwa kambani yedu.
Kuwedzera pakuva inokosha yepamusorosoro vashandi mubhizimisi kukura, kambani yedu ndiyo imwe vasiri rakarukwa indasitiri mapiyona izvo akashandisa wandei patented zvinhu uye nezvinhu zvitsva. Boka redu inoomerera makirisito muuzivi "professionalism, kuvimbika uye utsanzi" uye basa chinangwa "kuvimbika, unhu wokutanga, mutengi pakutanga". Tinoramba kuongorora vachishingairira, ramba pamusoro, uye co-sika "akunde zvisamumirira" ramangwana rakajeka nemi!